Ngabe ukuphepha kwawo wonke umzimba we-aluminium kuqinisekisiwe ukuthi ungakulungisa kanjani |
Ngabe ukuphepha kwawo wonke umzimba we-aluminium kuqinisekisiwe ukuthi ungalungiswa kanjani
Ukusetshenziswa kwe-aluminium ezimotweni kukhombisa ukukhula okwandayo unyaka nonyaka. Kunamamodeli amaningi asebenzisa i-aluminium ngengxenye noma ephelele. Uhlelo lokudlulisa imoto LUSEBENZISA izingxenye ze-aluminium, ezinamandla kuphela nobulukhuni obanele, kepha futhi zinokuqhuba okuhle kokushisa. Amaqiniso akhombisile ukuthi ukusetshenziswa kwe-aluminium ezimotweni kuthole izinzuzo ezinhle kwezenhlalo nakwezomnotho.
Ukuphepha kwe-aluminium alloy yezimoto
1, i-aluminium iletha izinzuzo zesakhiwo, insimbi nayo ibalulekile
Njengoba kwaziwa yibo bonke, uma kuqhathaniswa nensimbi ejwayelekile, okokusebenza kwe-aluminium kungabikezela kangcono isimo sokushayisana ekuqaleni komklamo, futhi kuqinisekise ukwakheka nokuma kokushayisana okugcinwe. Ngakho-ke, umzimba we-aluminium ungathuthukisa ukuphepha kwemoto ngezinga elithile futhi uzuze ukusebenza okungcono ekuhlolweni kokuphahlazeka.
Yize amanye amandla wesivuno se-aluminium alloy angafinyelela ngaphezu kuka-500-600 mpa kanye nezimbangi zensimbi zensimbi, kepha kwezinye izinto ezibalulekile, azikabi njengamandla wensimbi enamandla amakhulu, ngakho kwezinye izingxenye ezibalulekile zizosebenzisa futhi ukuqiniswa kwensimbi enamandla amakhulu, okufana nomzimba we-rover aluminium, ne-4% yensimbi yamandla aphezulu ne-1% yensimbi ye-thermoforming ultra-high steel.
I-2, ukwenziwa kwe-braking optimization optimization, ukulawula ukuphepha kuya ezingeni eliphakeme
Eqinisweni, ukuphepha komzimba we-aluminium akubonakali kuphela esakhiweni nasezimpawu zezinto ezibonakalayo, kepha futhi kudlala indima enkulu ekubhuleni nasekuphatheni imoto. Iloli likaF-150 lokuthutha iF-150, ngokwesibonelo, linesisindo esingaphansi kuka-318kg kunalesi ebesilandulele ngenxa yomzimba walo onama-aluminium onke. I-inertia yemoto yehliswe kakhulu futhi nebanga lamabhuleki lincishiswe kakhulu. Yingakho i-F-150 ithola isilinganiso sezokuphepha sezinkanyezi ezinhlanu esivela ku-National Highway Traffic Safety Administration, okuyinikeza isilinganiso esiphezulu sokuphepha kunamamodeli afanayo. Futhi ngoba i-aluminium inezici zokumelana nokugqwala, inganikeza imoto umjikelezo wokuphila ozinze kakhudlwana.
Izidingo zehadiwe zokugcina umzimba u-aluminium
1. Umshini okhethekile wokuvikela igesi ovikelekile nomshini wokulungisa isimo somzimba we-aluminium
Ngenxa yokuncibilika okuphansi kwe-aluminium, ukusonteka okulula, izidingo zokushisela zamanje eziphansi, ngakho-ke kufanele usebenzise umshini okhethekile we-aluminium womzimba ovikelekile. Umshini wokulungisa umumo awukwazi ukufana nomshini wokulungisa umumo ojwayelekile ukuchofoza nokudweba, ungasebenzisa kuphela umshini okhethekile wokulungisa isimo somzimba we-aluminium wokushisela i-muon nail, usebenzisa i-muon nail stretcher yokudweba.
2. Amathuluzi akhethekile wokulungisa umzimba we-aluminium kanye nezibhamu ezinamandla ze-riveting
Okuhlukile ekulungisweni kwengozi yemoto yendabuko, ukulungiswa komzimba we-aluminium ikakhulukazi ngendlela yokugwedla, okumele ibe nesibhamu esiqinile se-riveting. Futhi ukulungisa amathuluzi omzimba we-aluminium kufanele anikezelwe, awakwazi ukuxubaniswa nokugcinwa kwamathuluzi omzimba wensimbi. Ngemuva kokulungisa umzimba wensimbi, insimbi yensimbi izosala kumathuluzi. Uma isetshenziselwa ukulungisa umzimba we-aluminium, insimbi eyilahliwe izofakwa ebusweni be-aluminium, ibangele ukugqwala ku-aluminium.
3. Uhlelo lokuqoqa uthuli olungenakho ukuqhuma
Enkambeni yokupholisha umzimba we-aluminium, kuzoba nenqwaba yempuphu ye-aluminium, i-aluminium powder ayilimazi nje kuphela emzimbeni womuntu, kepha futhi iyasha futhi iyaqhuma, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kube nokuqoqwa kothuli okungenabufakazi bokuqhuma kanye nohlelo lokuhlanza ukuze ukumunca i-aluminium powder ngesikhathi.
4. Indawo yokuzimela ezimele
Ngenxa yezidingo eziqinile zenqubo yokulungisa umzimba we-aluminium, ukuqinisekisa ukuphepha kwekhwalithi yesondlo kanye nokusebenza, ukuvikela i-aluminium powder ekungcoleni naseziqhumeni zomhlangano, kubalulekile ukusetha isiteshi sokulungisa umzimba se-aluminium esihlukile. Ngaphezu kwalokho, abasebenzi be-aluminium abagcina umzimba beqeqeshelwa umsebenzi, bekwazi kahle ukugcinwa kwenqubo yokugcinwa komzimba we-aluminium, ukuthi ungabeka kanjani umdwebo, i-welding, i-riveting, i-bonding njalonjalo.
Inothi lokusebenza kokugcinwa komzimba kwe-aluminium
1, aluminium ingxubevange ipuleti eqine wendawo akukuhle, kulula ukwambula. Isibonelo, ngoba ukwakheka kwepuleti langaphakathi le-hood yenjini kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwe-tensile deformation yomzimba ngenkathi kwenziwa amandla amakhulu e-aluminium alloy, ukunwebeka kudlule ku-30%, ngakho-ke kulondolozo ukuqinisekisa ukuthi umumo awuguquki ngangokunokwenzeka, ukuvikela imifantu.
2. Ukunemba kobukhulu akulula ukukubamba, futhi ukubuyela emuva kunzima ukulawula. Indlela yokukhipha ingcindezi ngokushisa okushisa okuphansi kufanele yamukelwe ngangokunokwenzeka ekunakekelweni ukuze kuqiniswe ngaphandle kwezimo zesiphene sesibili ezifana nokubuyela emuva.
3, ngoba i-aluminium ithambile kunensimbi, ukushayisana nokunamathela okuhlukahlukene kothuli ekulondolozweni kuzodala izingxenye zomhlaba, imihuzuko nokunye ukukhubazeka, ngakho-ke kubalulekile ukwenza ukuhlanzwa kwesikhunta, ukuhlanzwa kwemishini, uthuli lwezemvelo, ukungcoliswa komoya nezinye izinto thatha izinyathelo ezifanele ukuqinisekisa ubuqotho bezingxenye.
Ngenxa yezinzuzo zayo zokusebenza, i-aluminium alloy isetshenziswa kakhulu emzimbeni wezimoto, ukuphepha kwe-aluminium alloy kungaqinisekiswa. Ngaphezu kwalokho ukugcinwa komzimba wemoto nakho kulula kakhulu, ukuthola eminye imininingwane sicela uxhumane nathi.